HORDHAC: Real Madrid vs Juventus – Gool FM
HORDHAC: Real Madrid vs Juventus
Byare April 11, 2018
(Europe) 11 Abriil 2018. Real Madrid ayaa caawa raaskeeda Bernabeu ku marti qaadeysa Juventus lugta labaad ee wareega sideed dhammaadka Champions League iyadoo ay jirto in lugtii hore ay kaga soo adkaatay saddex gool iyo waxba.
Los Blancos Natiijo fiican ayay ka heystaa Marwada Duqda ah, balse kooxda reer Talyaani ayaa waxaa dhiiro galinaya natiijadii lama filaanka ahayd ay xalay Roma ka gaartay Barcelona.
Barca ayaa lugtii hore 4-1 uga soo adkaatay kooxda Roma, ma jirin cid marna saadaalineysay inay ka jawaabi doonto natiijadaasi, balse waxay caalamka u muujisay in kubbada cagta wax kastaa laga filan karo kaddib markii ay u dhiibtay 3-0.
Real Madrid waxaa caawa ganaax uga maqnaan doona kabtankooda Sergio Ramos.
Jesus Vallejo, 21-jir ayaa daafaca dhexe kula soo bilaaban kara Raphael Varane.
Juventus waxaa ka maqnaan doona xiddigeeda Paulo Dybala, kaa oo lugtii hore ku baxay roose kaddib labo jaale oo la siiyay.
Real Madrid ayaa eeganeysa inay ku guuleysato Champions League markii afaraad shan xilli ciyaareed gudahood.
Kulanka: Real Madrid vs Juventus (Lugta 2-aad ee wareega 8-da Champions League)
Goobta: Santiago Bernabéu
Goorta: 9:45 Habeenimo
Garsoorka: Michael Oliver (England)
◾Kulankani waa kii 21-aad ay labada kooxood ku kulmaan tartamada Yurub, 20-kii kulan ay horey ugu kulmeen Champions League iyo European Cup, Real Madrid ayaa badisay 10-jeer halka ay Juventus adkaatay 8-jeer, labo jeer ayayna bar baro galeen.
◾Kulanka kaliya ee Yurub laga ciyaaray in ka badan kulanka Real Madrid vs Juventus waa midka u dhexeeya Bayern Munich vs Real Madrid (24-jeer).
◾Juventus ayaa adkaatay labo jeer oo qura sideedii kulan ay bannaanka kula soo ciyaartay Real Madrid (5-guul darro iyo hal bar baro), labada jeer ay adkaatay ayaa kala ah 1-0 bishii Feebaraayo 1962 iyo 2-0 bishii November 2008.
◾Real Madrid hal jeer oo qura ayay ku guul darreysatay inay u soo gudubto wareega xiga ee kulamada bug baxa marka ay bannaanka ku soo adkaato lugta hore 32-jeer ay horey u ciyaartay, Odense Boldklub ayaa lama filaan ku dhigtay 1994-95 tartanak UEFA Cup (Lugtii hore ayay ku adkaatay 3-2, lugtii labaad ee lagu ciyaarayay mininkeeda ayaa lagu dubtay 2-0.
◾Real Madrid ayaa markasta gool dhalineysay 24-kii kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaarto Champions League, 63-gool ayay dhalisay wadar ahaan.
◾ Bianconeri ayaa shabaqeeda ilaashatay 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ay bannaanka ku soo ciyaarto Champions League.
◾Cristiano Ronaldo ayaa shabaqa booqanayay dhammaan lixdii kulan uu ka horyimid Juventus, sagaal gool ayuu ka dhaliyay wadar ahaan.
Safafka Macquulka ah ee Real Madrid vs Juventus:
Liverpool kaliya ma riiqin Liverpool ee xataa rikoor ayey dhigtay
HORDHAC: Bayern Munich vs Sevilla